Arghakhanchi Bulletin : The Fastest News Publisher from Nepal
हाम्रो बारेमा/ सम्पर्क / Facebook Twitter Google youtube
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर :- १९५४/०७७ -७८
राजस्थान रोयल्स द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स ७ विकेटले पराजित
325 पटक पढिएको
एजेन्सी। इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को ३७ औं खेलमा राजस्थान रोयल्सले चेन्नई सुपर किंग्सलाई ७ विकेटले पराजित गरेको छ ।
जितका लागि १ सय २६ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले १७.३ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो । राजस्थानका जस बटलर ४८ बलमा ७ चौका र २ छक्का सहित ७० रनमा अविजित रहे । कप्तान स्टिभ स्मिथ ३४ बलमा २ चौका सहित २६ रनमा अविजित रहे । चौथो विकेटका लागि बटलर र स्मिथले ९८ रनको अविजित साझेदारी गर्दै सहज जित पक्का गराएका थिए ।
तेस्रो ओभरको अन्तिम बलमा दीपक चहरले ओपनर बेन स्टोक्सलाई ११ बलमा ३ चौका सहित १९ रनमा बोल्ड आउट गर्दै पहिलो सफलता दिलाए । जोश हेजलवुडले चौथो ओभरको दोस्रो बलमा रोविन उथप्पालाई ४ रनमा क्याच आउट गराए ।
चहरको पाँचौ ओभरको तेस्रो बलमा विकेटकिपर सन्जु स्यामसन धोनीबाट शून्यमा आउट भएका थिए । चेन्नईका दीपक चहरले ४ ओभरमा १ मेडन सहित १८ रन खर्चेर २ विकेट लिए । जोश हेजलवुडको नाममा एक विकेट रह्यो ।
त्यसअघि शेख जायद स्टेडियम आबूधाबीमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको चेन्नईले २० ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा १ सय २५ रन बनाएको थियो । चेन्नईका अलराउन्डर रविन्द्र जडेजा ३० बलमा ४ चौका सहित सर्वाधिक ३५ रनमा अविजित रहेका थिए । केदार जाधव ४ रनमा अविजित रहे ।
चेन्नईले सुरुवात देखिनै कमजोर प्रर्दशन गरेको थियो । जोफ्रा आर्चरले तेस्रो ओभरको अन्तिम बलमा फाफ डु प्लेसिसलाई जस बटलरबाट १० रनमा क्याच आउट गराउँदै पहिलो सफलता दिलाए । अर्का तीव्र गतिका बलर कार्तिक त्यागीको चौथो ओभरको अन्तिम बलमा शेन वाटसन राहुल टेवाटियाबाट ८ रनमा क्याच आउट हुन पुगे ।
श्रेयस गोपालले नवौं ओभरको दोस्रो बलमा ठूलो सट खेलेका ओपनर साम करन लङअनमा बटलरबाट २२ रनमा क्याच आउट हुन पुगे । करनले २५ बलमा १ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । राहुल टेवाटियाको दशौं ओभरको अन्तिम बलमा टप एज लागेर सन्जु स्यामसनबाट आम्बाती रायुडु १३ रनमा क्याच आउट भए । रायुडुले १९ बलमा २ चौका प्रहार गरे ।
१८ औं ओभरको चौथो बलमा महेन्द्रसिंह धोनी २८ बलमा २ चौका सहित २८ रनमा रन आउट भए । पाँचौ विकेटका लागि धोनी र रविन्द्र जडेजाले ५१ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
श्रेयस गोपालले ४ ओभरमा १४ रन खर्चेर १ विकेट लिए । राहुल टेवाटियाले ४ ओभरमा १८ रन खर्चेर १ विकेट लिए । कार्तिक त्यागीले ४ ओभरमा ३५ रन खर्चेर १ विकेट लिए । जोफ्रा आर्चर २० रन खर्चेर १ विकेट लिए ।
जारी आइपिएलमा चेन्नईको यो सातौं हार हो । योसँगै चेन्नई आइपिएलमा पहिलो पटक लिग चरणबाट बाहिरिने डर बढ्दै गएको छ । चेन्नई अव प्ले अफमा पुग्न बाँकी चार खेल फराकिलो अन्तरले विजयी भएरमात्र हुँदैन अन्य नतिजा पनि आफू अनुकुल आउनु पर्नेहुन्छ । राजस्थानले चौथो जित निकाल्दै झिनो आशा कायमै गरेको छ । चेन्नईले अब शुक्रबार मुम्बई इन्डियन्ससँग खेल्ने छ । राजस्थानले बिहिबार राजस्थान रोयल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ ।
दिल्ली क्यापिटल्स ९ खेलमा ७ मा जित र २ मा हार सहित १४ अंकका साथ शीर्षस्थानमा छ । मुम्बई ९ खेलमा ६ मा जित र ३ मा हार सहित १२ अंक जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ । बेंगलोर ९ खेलमा ६ मा जित र ३ मा हार सहित १२ अंक भएपनि नेट रनरेटको आधारमा तेस्रो स्थानमा छ । कोलकाता ९ खेलमा ५ मा जित र ४ मा हार सहित चौथो स्थानमा छ । राजस्थान १० खेलमा ६ मा हार र ४ मा जित सहित पाँचौ स्थानमा उक्लिएको छ ।
सनराइजर्स हैदराबाद ९ खेलमा ६ मा हार र ३ मा जित सहित छैटौं स्थानमा छ । किंग्स इलेभेन पन्जाब ९ खेलमा ६ मा हार र ३ मा जित सहित सातौं स्थानमा छ । चेन्नई सुपर किंग्स १० खेलमा ७ मा हार र ३ मा जित सहित पुछारमा छ ।source - hamro khelkud
तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
नेपाल र युएईबीच खेल सुरु, नेपालले ब्याटिङ गर्दै (हेर्नुहोस् लाइभ)
जुनियर रोनाल्डोका आइडल मेस्सी
रोनाल्डोलाई पाँचौ पटक ‘वालेन डि ओर’को उपाधि
इपिएलका लागि चार उत्कृष्ठ खेलाडी छनौट
आर्मी र एपीएफको जित
विराटनगरको फाइनल यात्राका सहयात्री
अमेरिकाको पाठ्यपुस्तकमा लेखियो गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल हो
काठमाडौं।अमेरिकाको पाठ्यपुस्तकमा लेखियो गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल हो
आफ्नो कुकुर ‘मे’जर’ सँग खेल्ने क्रममा बाइडेन चि’प्लिएर घा’इते
काठमाडौं- आफ्नो कुकुर ‘मे’जर’ सँग खेल्ने क्रममा बाइडेन चि’प्लिएर घा’इते
लकडाउनमा घर ज्वाई बसेका भिनाजुले साली भगाएपछि…
कतार नेपाली एकता समाजको बिरोध कार्यक्रम सम्पन्न
बिहान खाली पेटमा कफीः गम्भीर रोगको खतरा
एजेन्सी। बिहान खाली पेटमा कफीः गम्भीर रोगको खतरा
न्यायका लागि ढिलाइ किन..? आखिर किन बलत्कारीलाई संरक्षण ..?
कसरी गर्नुहुन्छ ब्रस ? यस्तो छ दाँत माझ्ने सही तरिका
अर्घाखाँची बुलेटिन डट्कम नेपालि भाषाको समाचार पोर्टल हो !समचार,विचार ,मनोरञ्जन,खेलकुद ,प्रवास, र विश्वका खबर ,सुचना प्राविधि,सौन्धर्य,रोचक सामाग्री ,मिडिया तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणहरु सम्बन्धी समाचार अर्घाखाँची बुलेटिनका प्राथमिकता हुन् !
दर्ता प्रमाण पत्र नम्बर :- १९५४/०७७ -७८
Sandhikharka, Chutrabesi - 2, Bhaktitola Near Green Boarding
Arghakhanchi Bulletin ©